Ny WhatsApp sy ny satan'ireo lahatsoratra misy azy dia azo alaina amin'ny Android | Vaovao momba ny gadget
Hita amin'ny Android indray izao ny WhatsApp sy ny satan'ireo lahatsoratra
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nambara ny fanombohana ny satan'ny fampiharana WhatsApp amin'ny endrika lahatsoratra, ary Androany maraina dia efa nohavaozina ny fangatahana ho an'ireo mpampiasa Android. Amin'ity fanavaozana ity dia afaka milaza isika fa ireo sata teo aloha dia nahatratra tamin'ny fomba ofisialy ny fampiharana fandefasan-kafatra ary niaraka tamin'izy ireo ny "tehamaina teo am-pelatanana" nomen'ny fiarahamonina ireo mpamorona sy tompon'ny rindranasa. Aleo tadidintsika fa ny iray amin'ireo zava-baovao natolotr'i WhatsApp dia ny fanjakana indrindra miaraka amin'ny safidy hanampiana horonan-tsary, GIF na mitovy aminy izay maharitra 24 ora, saingy toa tsy dia nahomby loatra izany ary nandinika indray ny fanapahan-kevitra izy ireo, manao ny fanjakana misy amin'ny lahatsoratra indray.
Midika ve izany fa nesorin'izy ireo ireo fomba vaovao amin'ny fomban'ny Snapchat na Instagram Stories? Tsia. Mbola misy ireo fa ny hany miova amin'ny fanavaozana dia izao Azonao atao ny manoratra izay tadiavinao ao amin'ny faritra Info ao amin'ny mombamomba anao. Mba hanaovana ireo fanovana ireo amin'ny mombamomba anao dia mila mankany amin'ny Fikirana ary kitiho ny anaranao mombamomba Mba hanovana ny lahatsoratra, eo ambany no hahitanao ny safidy misy raha nanavao ianao.
Raha sanatria ka tsy misy fanavaozana mandeha ho azy ianao dia avelanay eto ambany ny kinova vaovao hahafahanao maka azy io amin'ny fitaovanao. Amin'izao fotoana izao, ny kinova vaovao dia tsy ho an'ny mpampiasa Android ihany, fa tsy ho ela dia hiseho amin'ireo mpampiasa fitaovana iOS. Na ahoana na ahoana, amin'ity indray mitoraka ity dia efa afaka milaza isika fa misy ny kinova 4.4 ho an'ny rehetra, farafaharatsiny any Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Hita amin'ny Android indray izao ny WhatsApp sy ny satan'ireo lahatsoratra
Guess koa dia manondro ny lamaodin'ny smartwatches miaraka amin'ny Android Wear
Milalao Pokémon Yellow amin'ny Apple Watch dia azo atao tsy misy dikany